အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အပြာရောင်ဖဲကြိုးလေး သုံးခု
23 Responses to “အပြာရောင်ဖဲကြိုးလေး သုံးခု”
သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေကို ဖွင့်ချမပြတတ်ကြပေမယ့်
သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေကိုတော့ ရင်ထဲမှာ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရလဒ်လေး နော် ညီမ
ဖဲကြိုးပြာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ လက်ဆောင်မျိုးရဖူးတယ်အစ်မ...။
ကလေးလေး ပြောတဲ့ စကားက ဒီစာစုလေးကို တော်တော် တာ သွားစေပါတယ်..
ရင်ထဲမှာ ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ ခံစားရပါတယ်..
အသိအမှတ်ပြုမှု၊ လေးစားမှုဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အလိုအပ်ဆုံး ပေါင်းကူးတံတားလေးပေ့ါ။ အဲလိုပေါင်းကူးတံတားလေးကို အမြဲထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဖဲကြိုးပြာစီမံကိန်း လုပ်ပေးတဲ့ ဆရာမ ကို လေးစားမိပါတယ် ... ။
အကယ်၍များ သားလေးကို အဖေက ဖဲကြိုးပြာလေး နှစ်ခုပေးရင် ကျန်တစ်ခုကို သူက ဘယ်သူ့ကို ပေးမလဲ မသိဘူးနော်..း)
စာကောင်း အတွေးကောင်းလေးတွေ ဝေမျှတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ မချောရေ.
(ဖဲကြိုးပြာနဲ့တူတဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုး ရဖူးတယ် စိတ်ထဲမှာလဲကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပေါ့ ရတဲ့အချိန်မှာလေ)
လူသားအားလုံ ဗဟုသုတရစေရေးအတွက်.. စာပေများ စုဆောင်တင်ပြတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
သာမန်စေတနာနဲ့ ဤမျှ အားထုတ်မှုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤဇာတ်လေးက... မိသားစု အချိန်ပေးဖို့နဲ့.. မေတ္တာကို သရုပ်ဖော်တာ ပီပြင်ပါတယ်။
အပြုအမူ၊ နှုတ်စကားတစ်ခွန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအပေါ် ကြီးမားများပြားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေတာ ဆင်ခြင်ရင်း အပြာရောင်ဖဲကြိုးကလေးတွေ ဘယ်သူ့ကို မဆို ပေးဖြစ်အောင် ပေးကြစို့။
Really nice post sis !
အစ်မရေးတဲ့ ပို့ စ်အားလုံးလိုလို သဘောကျပါကြောင်း
မနေ့ကတည်းကဖတ်ထားတာ.. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကွန်မန့်မပေးခဲ့မိလည်းမသိဘူး.. :D.. ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. မချောရေ... ကြည်လည်းကြည်နူးရတယ်...
ကောင်းတယ်...ကလေးတွေကို ပြောပြတာထက် အခုလို project လေးတွေနဲ့ သက်သေပြနိုင်အောင်ကြိုးစားတာက ပိုပြီး ထိရောက်တယ်...ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ တပည့်မလေးတွေလည်း သူရို့မိဘတွေကို အထင်အမြင်လွဲနေကြလွန်းလို့ နေ့ရှိသ၍ နားလည်အောင် ရှင်းပြနေရလွန်းလို့ ဒီပို့စ်လေးကို ပိုသဘောကျမိတယ်...လာမယ့်နှစ်ရောက်ရင်တော့ ကလေးနဲ့ မိဘအကြားမှာ အဆင်ပြေ၊ နွေးထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ သုံးဖို့ ဒီပိုစ့်က ပြောလိုက်သလိုပဲ...ကျေးဇူးဗျို့ ဒေါ်ချော...
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့ စ်လေး မချောရေ...